आजै चार बजेसम्म वार्ता नभए आन्दोलनमा जाने डा.केसी पक्षको चेतावनी – Health Post Nepal
२०७७ असोज २३ गते १५:३०
अनसनरत डा गोविन्द केसीसँगको सरकारी वार्ता टोलीको आजको छलफल अनिश्चत जस्तै बनेको छ। बिहीवार बसेको दुवै पक्षबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगे पनि आज पुनः बैठक बस्न सकेको छैन्।
आज चार बजेसम्म वार्ता नभए पुनः आन्दोलनमा जाने डा. केसी पक्षले चेतावनी दिएको छ। डा. केसी निकट स्रोतका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ । तर सरकारी टोलीले वार्ताको लागि तादरुकता देखाएको छैन्।
सरकारी टोलीका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने भनेपछि छलफलअघि बढ्न नसकेको हो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पनि समय दिएका छैनन्।
खासगरी त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउने विषयमा समति हुन सकेको छैन।
डा. केसीले आधार मिचेर गरिएका ती नियुक्त्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न तथा विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
अपरान्ह ४ बजेसम्म पनि वार्ता नभएर आन्दोलनमा जाने केसी पक्षले चेतावनी दिएको छ । आज बिहानैदेखि डा. केसीको स्वास प्रश्वासमा समेत समस्या आइरहेको छ। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्दै गएको र निमोनियाँको लक्ष्यण देखिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्।
डा. केसीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक डा. सुवाश आचार्यका अनुसार थप परीक्षण हुँदै र आज छातीको सिटी स्क्यान गरिएको छ।
अनसनरत डा केसी लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका छन्। उनको यो १९ औँ अनसन हो ।
गत भदौ २९ गते जुम्लाबाट अनसन शुरु गरेका केसीलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि काठमाडौं ल्याइएको थियो। उनको माग सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. गोपीनाथ मैनाली र केसी पक्षबाट डा. जीवन बहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ।